ေယာက္်ားေကာင္းေတြ ခ်စ္သူအေပၚ လံုးဝ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာ ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
ေယာက္်ားေကာင္းေတြ ခ်စ္သူအေပၚ လံုးဝ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာ ၁၀ ခု
ယောက်ျားကောင်းတွေ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ ၁၀ ခု
ကျွန်တော် အရင်က ယောက်ျားတွေ ချစ်သူမပေါ်မှာ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အရာတွေအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ ရေးတုန်းက ခုခေတ်မှာ ဒီလိုတွေ မလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုပြီး ပြန်လှန်ပြောတဲ့ လူတွေ ရှိကြပါတယ်။
ပြောရရင် ” ယောက်ျားကောင်း” တွေပဲ အဲဒီလို ပြုမူဆက်ဆံတာပါ။ တကယ်လို့ သင့်မှာ အဲဒီ အမူအကျင့်တွေ မရှိရင်တော့ ယောက်ျားကောင်း ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားဖို့ လိုသေးလို့ပါပဲ။ တခြားဘက်ကကြည့်ပြီး လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာတွေကတော့
၁. သူမရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို ဘယ်တော့မှ အပြစ်မပြောပါနဲ့
” ဆံပင်လေး နည်းနည်းသာ ရှည်လိုက်ရင်” ” ပေါင်လေး နည်းနည်းသာ ကျသွားရင်” ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ သင့်ရုပ်ရည်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သင့်ကို နာကျင်အောင် ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပြောတတ်လုပ်တတ်သူတွေဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်စိတ်ကို လျော့နည်းသွားစေပြီး သူ့ကို မှီခိုစေလိုသူတွေပါ။
၂. သူမရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့
ချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ ဘာကိုမှ ဖုံးကွယ်ထားစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ သင့်ရဲ့ပါတနာ ဖုန်းကို ခဏထားခဲ့တိုင်း ခိုးကြည့်စပ်စုလို့ ရတယ် မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒီလို ခိုးကြည့်သူတွေဟာ သူတို့ဘာသာ လုံခြုံမှု မရှိပဲ သူတို့ပြသနာတွေကို သင့်အပေါ် ထိုးချချင်သူတွေပါ။
၃. သူမကို ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓာတ် မကျပါစေနဲ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုဟာ သူ တခြားသူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လောက် အားပေးလဲဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘေးက လူအားလုံးကို ကူညီအားပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပြီး ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓာတ် မကျစေပါဘူး။
၄. သူမရဲ့ တန်ဖိုးကို သိထားပါ
သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သင့်ရဲ့ ပါတနာအပေါ် သက်သေပြဖို့ လိုပြီလို့ သိလိုက်တဲ့ ခဏဟာ လမ်းခွဲဖို့ အချိန်ပါပဲ။ ချစ်သူတစ်ယောက်ဟာ သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ သင့်ကို အရှိအတိုင်း လက်ခံလို့ သင့်အနားမှာ နေတာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သင် ဘာလုပ်လို့၊ သူတို့ကို ဘာပေးလို့ ရှိနေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၅. သူမကို နောက်ပိုင်း ပို့မထားပါနဲ့
ချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဆိုတာ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝတွေ ပေါင်းစည်းသွားတာပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာ တစ်ကိုယ်ရည် အပန်းဖြေချိန် ရှိပေမယ့် သင့်ချစ်သူကိုလဲ သင့် အချိန်ဇယားရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာ နေရာပေးထားသင့်ပါတယ်။ သင့်အိမ်အပြန်ကို သူစောင့်နေရတဲ့အချိန်က တူတူရှိတဲ့ အချိန်ထက် များတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၆. သူမကို အထီးမကျန်ပါစေနဲ့
ချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာ နှစ်လမ်းသွားတွေ ဖြစ်ရမှာပါ။ လူသားတွေအတွက် စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တာ သဘာဝပါ။ သူမ စိတ်ဓာတ်ကျချိန်တွေမှာ သင်ဟာ သူမအတွက် ရှိနေပေးရပါမယ်။ မနက်တိုင်း သူမဘေးမှာ နိုးထပေးနိုင်ရပါမယ်။
၇. သူမအပေါ် ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်ပါနဲ့
ယောက်ျားကောင်း တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖောက်ပြန်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူအပေါ် ပေးထားခဲ့တဲ့ ကတိစကားကို ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်နေလို့ပါ။
၈. သူမကို ဘယ်တော့မှ မလေးမစား မပြုပါနဲ့
လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပေမယ့် ကျော်ပြီး အကြည့်ခံရတဲ့ အရည်အချင်းလေးပါ။ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်က လူအားလုံးကို လေးစားတတ်ပြီး ဘယ်တော့မှ အဆင့်အတန်း မခွဲခြားတတ်ပါဘူး။ အရည်အချင်းရှိသူဟာ တန်းတူညီမျှခြင်းကို မကြောက်ပါဘူး။
၉. သူမနဲ့ပြောရမယ့် အရေးကြီးစကားဝိုင်းတွေကို မရှောင်ပါနဲ့
မိသားစုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူကြားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ပြသနာဆိုတာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရှင်းမှ ပြီးမယ်ဆိုတာ ယောက်ျားကောင်းတွေ နားလည်ပါတယ်။ ပြသနာဆိုတာ ဒီတိုင်း ကြာကြာထားလေ ပိုဆိုးလေပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ ထိန်းထားပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဖွင့်ထုတ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၁၀. သူမကို ဘယ်တော့မှ အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့
အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်တာဟာ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပျက်စီးသွားစေပါတယ်။ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ထက် ဘယ်သူ့ကိုမှ နှိမ့်ချလိုစိတ် မရှိပါဘူး။
Previous: လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ လြယ္ကူ႐ုိးရွင္းသည့္ အခ်က္(၉)ခု
Next: Gentleman တစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အေသြးမ်ား